QM oo Golaha wadatashiga ka dalbatay dhaqan gelinta heshiiska doorashada | Baidoa24.com
Home WARARKA MAANTA QM oo Golaha wadatashiga ka dalbatay dhaqan gelinta heshiiska doorashada
QM oo Golaha wadatashiga ka dalbatay dhaqan gelinta heshiiska doorashada
Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegtay iaby ku faraxsan tahay in Golaha Wadatashiga Qaran ay shalay gaareen is afgarad ku aaddan in la caddeeyo habraaca doorashada iyo dardargelinta doorashada Golaha Shacabka.
Warsaxaafadeed kasoo baxay Qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay in QM aaminsan tahay in mudnaanta hadda la leeyahay ay tahay fulinta go’aamadan si loo gaaro natiijo la aamini karo oo si weyn loo aqbali karo marka la gaaro waqtiga cusub ee la qabtay ee 25-ka Febraayo.
” QM waxa ay sidoo kale ku dhiirri-gelinaysaa hoggaamiyeyaasha siyaasadda Soomaaliya in ay sii wadaan wada shaqayn ku dhisan niyad-sami, kana fogaadaan wax walba oo keeni kara xiisado cusub ama khilaaf, ayna diiradda saaraan sidii loo gaari lahaa hanaan doorasho oo lagu kalsoonaan karo oo ay dani ugu jirto shacabka Soomaaliyeed.
Warkaan kasoo yeeray Qaramada Midoobay ayaa kusoo beegmaya xilli dhowr jeer hoggaamiyeyaasha Soomaalida ay gaareen heshiis la xiriira doorashooyinka balse uusan dhaqan gelin.
Previous articleFaaf faahin kasoo baxeysa dagaal kadhacay Magaalada Feerfeer
Next articleAxmed Karaash oo Saraakiisha Ciidamada Madaxtooyada kala hadlay dardar gelinta Amniga